COVID-19 ရောဂါ ကာကွယ်ဆေးတွေ အကြောင်း သိကောင်းစရာ – Voice of Myanmar
၂၇၊ မေ၊ ၂၀၂၂
ကမ္ဘာ့ ကပ်ရောဂါ ဆိုးကြီးတခု ဖြစ်တဲ့ COVID-19 ရောဂါဟာ မြန်မာအပါအဝင် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအသီးသီးမှာ ကူးစက်ပြန့်ပွားနှုန်းက တဖြည်းဖြည်း လျော့နည်းလာနေပေမယ့် တဖက်မှာလည်း မျိုးကွဲမျိုးစုံ ဆင့်ကဲပြောင်းလဲ ကူးစက်မှုတွေကလည်း ရှိနေဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။ COVID-19 ကူးစက်ပြန့်ပွားမှုကို ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ ကာကွယ်ဆေးတွေကို နိုင်ငံအသီးသီး၊ ဆေးဝါးထုတ်လုပ်တဲ့ ကုမ္ပဏီ အသီးသီးက ထုတ်လုပ်လာကြပြီး၊ နိုင်ငံအတော်များများကို လွှမ်းခြုံဖြန့်ဝေလာနေတာလည်း တွေ့ရပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း COVID-19 ရောဂါ ကာကွယ်ဆေးထိုးတာတွေ အများအပြားလုပ်လာနေတာလည်း ရှိနေပါတယ်။ ဒီတော့၊ ဒီကာကွယ်ဆေးတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘာတွေ သိထားသင့်သလဲ၊ ကာကွယ်ဆေးထိုးသင့် မသင့် ဆိုတာတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့၊ အမေရိကန်နိုင်ငံမှာ နေထိုင်ပြီး ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ စာပေ၊ ဆောင်းပါးတွေ ရေးသားပညာပေးနေတဲ့ ဒေါက်တာတင့်ဆွေကို VOM က ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်။
VOM ။ ။ ကိုဗစ် ကာကွယ်ဆေးတွေ နိုင်ငံအသီးသီးက အမျိုးစုံအောင် ထုတ်လုပ်လာကြတာမှာ ဘယ်နိုင်ငံက ဆေးကို နိုင်ငံတကာက အများဆုံး အသုံးပြုကြပါသလဲ ဆရာ။
Dr. တင့်ဆွေ ။ ။ အကောင်းဆုံး ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ဆေးများဆိုတာက mRNA COVID-19 vaccines အမျိုးအစားကာကွယ်ဆေးတွေဖြစ်တယ်။ ယူအက်စ်အေထုတ် Pfizer-BioNTech နဲ့ Moderna ဆေးတွေက J&J/Johnson ထက်ပိုကောင်းတယ်။
ဘယ် ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ဆေးတွေကို အများဆုံးသုံးသလဲ ဆိုတာမှာကျတော့၊ ကာကွယ်ဆေးတွေထုတ်စမှာ ဆေးအမျိုးပေါင်း ရာဂဏန်းရှိခဲ့တယ်။ ၂၀၂၀ ခုနှစ်မှာ ကာကွယ်ဆေးအမျိုးပေါင်း ၂၀ ကျော်ကို အသုံးပြုနေကြတယ်။
၂၂-၅-၂၀၂၂ နေ့အထိ တကမ္ဘာလုံးလူဦးရေရဲ့ ၆ရ့၄% ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေး အနည်းဆုံး ၁ ကြိမ်ထိုးပြီးပြီ။ အရေအတွက်အားဖြင့် ၅.၁၇ ဘီလီယန်ဖြစ်တယ်။
1. Oxford-AstraZeneca ၁၈၄ နိုင်ငံ
2. Pfizer-BioNTech ၁၆၄ နိုင်ငံ
3. Moderna ၁၀၇ နိုင်ငံ
4. Johnson & Johnson ၉၇ နိုင်ငံ
5. Sinopharm-Beijing ၇၆ နိုင်ငံ
6. Sinovac ၄၀ နိုင်ငံ
7. Gamaleya (Sputnik V) ၃၈ နိုင်ငံ
8. Bharat Biotech (Covaxin) ၂၇ နိုင်ငံ
9. CanSino ၂၄ နိုင်ငံ
10. Novavax ၂၂ နိုင်ငံ
11. Sputnik Light ၆ နိုင်ငံ
12. Sinopharm-Wuhan ၄ နိုင်ငံ
13. Abdala ၄ နိုင်ငံ
14. Soberana 02 ၃ နိုင်ငံ
15. QazVac ၂ နိုင်ငံ
16. Vector Institute (EpiVacCorona) ၂ နိုင်ငံ
17. KoviVac/Chumakov ၁ နိုင်ငံ
18. IMBCAMS ၁ နိုင်ငံ
19. KCONVAC ၁ နိုင်ငံ
20. Soberana Plus ၁ နိုင်ငံ
21. COVIran Barekat ၁ နိုင်ငံ
22. FAKHRAVAC ၁ နိုင်ငံ
23. Razi Cov Pars ၁ နိုင်ငံ
24. Medigen ၁ နိုင်ငံ
25. Turkovac ၁ နိုင်ငံ
26. ZF2001 ၁ နိုင်ငံ
VOM ။ ။ လက်ရှိ အသုံးပြုနေတဲ့ ဒီကာကွယ်ဆေးတွေအပေါ် ဆေးသုတေသနပညာရှင်တွေရဲ့ သုံးသပ်ချက်တွေကရော၊ ဘယ်လို ရှိပါသလဲ။ ဘယ်ဆေးကတော့ဖြင့် အကောင်းဆုံး၊ ဘယ်ဆေးကတော့ဖြင့် စိတ်မချရဘူး ဆိုပြီး သတ်မှတ်တာရော ရှိပါသလားဆရာ။
၂၀၂၂ ခုနှစ် မတ်လကိန်းဂဏန်းတွေအရ အပြောင်းအလဲတွေရှိလာတယ်။ Pfizer နဲ့ BioNTech ကာကွယ်ဆေးတွေကိုတော့ နိုင်ငံပေါင်း ၁၅၆ မှာ ထိုးပေးနေတယ်။
VOM ။ ။ အရင်ကတော့ အသက်အရွယ်ကြီးသူတွေကို အရင်ဦးစားပေးထိုးကြတယ်၊ မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင် အသက် ၄၀ အထက်ကို အရင်ထိုးပေးတာပေါ့နော်။ အဲဒီနောက်မှာတော့ အသက် ၁၈ နှစ် အထက်၊ အခု လက်ရှိမှာဆိုရင် အသက် ၁၄ နှစ် အထက် ဆိုပြီး ထိုးပေးလာတာတွေ ရှိလာတယ်။ နိုင်ငံတကာမှာရော အသက် ဘယ်နှနှစ်က စ လို့ ထိုးလို့ရပါပြီလဲ ဆရာ။
Dr. TS ။ ။ ယူအက်စ်အေမှာ အသက် အငယ်ဆုံး ၅ နှစ်အထိ ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေး ထိုးနိုင်ပြီ။ Pfizer vaccine ဆေးကိုသာ ထိုးစေတယ်။ အသက် ၁၂ နှစ်အထက်ကို ဘူစတာခေါ် အားဖြည့်ကာကွယ်ဆေး ထိုးပေးနေတယ်။
ဟောင်ကောင်မှာ တရုပ်လုပ် Sinovac vaccine ကာကွယ်ဆေးကို အသက် ၃ နှစ်အထိ ထိုးစေတယ်။
VOM ။ ။ ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးတွေ ထိုးကြတဲ့အခါ အခုဆိုရင် ၂ ကြိမ်တည်းမကပဲ၊ booster dose တွေပါ ထိုးလာကြတယ်။ ဒီလို ထိုးတဲ့အခါ အရင် ၂ ကြိမ် ထိုးထားတဲ့ အမျိုးအစားနဲ့ မတူတာကို ထိုးမယ်ဆိုရင် ကိုယ်ခံအား ပိုရတယ်၊ မရဘူး ဆိုတာတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့လည်း ရှင်းပြပေးပါဆရာ။
Dr. TS ။ ။ ဘူစတာခေါ် အားဖြည့်ကာကွယ်ဆေးဆိုတာ မဖြစ်မနေထိုးရမဲ့ ပဌမနဲ့ ဒုတိယဆေး ၂ လုံးထိုးပြီးတဲ့နောက်မှာ ကိုဗစ်ကပ်ရောဂါက သိသိသာသာကျဆင်းမလာသေးတာနဲ့ ဗိုင်းရပ် မျိုးသစ်တွေလည်း များလာလို့ တတိယအလုံး ထိုးစေတာဖြစ်တယ်။ ဆေးကတော့ အတူတူပါပဲ။ အခုဆိုရင် စတုတ္ထအလုံးပါထိုးနေပြီ။
VOM ။ ။ ကာကွယ်ဆေးလို့ ပြောကြတဲ့အခါမှာ သူ့ကို ထိန်းသိမ်းထားရှိရတဲ့ cold chain ကိစ္စက မဖြစ်မနေ ပါလာတာမှာ၊ မြန်မာနိုင်ငံမှာကတော့ ဒီ အအေးဓာတ် ထိန်းသိမ်းမှုစနစ်အပေါ် အတော်များများက ပူပန်ကြ ပြောကြတာလေးတွေ ရှိပါတယ်ဆရာ။ ဆိုတော့ ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးအတွက် အဓိကကျတဲ့ အအေးဓာတ် ထိန်းသိမ်းမှု အကြောင်းလေး ရှင်းပြပေးပါဆရာ။
Dr. TS ။ ။ အအေးဓါတ်စနစ်ဆိုတာ ဆေးအများစုအတွက်လိုအပ်တယ်။ ကာကွယ်ဆေးတွေက ပိုပြီး သတိထားရတယ်။
• ယူအက်စ်အေထုတ် Moderna (-20C) မှာ ၆ လထားလို့ရတယ်။
• ယူအက်စ်အေထုတ် Pfizer-BioNTech (-70C) မှာ ၆ လထားလို့ရတယ်။
• ယူကေထုတ် Oxford Uni-AstraZenaca ၂-၈ ဒီဂရီ စီ၊ ရိုးရိုးရေခဲသေတ္တာထဲထားနိုင်တယ်။
• တရုပ်ထုတ် Sinovac ၂-၈ ဒီဂရီ စီ၊ ရိုးရိုးရေခဲသေတ္တာထဲထားနိုင်တယ်။
• ရုရှားထုတ် Gamaleya (Sputnik V) – Viral vector – ရိုးရိုးရေခဲသေတ္တာထဲထားနိုင်တယ်။
VOM ။ ။ ကာကွယ်ဆေး ထိုးကြပြီဆိုတော့၊ ကာကွယ်ဆေးတွေရဲ့ သဘောတရားလေးတွေ၊ ဆေးမထိုးခင် သတိထားရမယ့်၊ ဆောင်ရရှောင်ရမယ့် အချက်လေးတွေနဲ့၊ ကာကွယ်ဆေး ထိုးပြီးရင် ဖြစ်တတ်တာလေးတွေကိုလည်း ပြောပြပေးပါဆရာ။
Dr. TS ။ ။ ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေး ဘေးထွက်သက်ရောက်မှုများက တယောက်နဲ့ တယောက် မတူပါ။ ကာကွယ်ဆေးတမျိုးနဲ့တမျိုးလည်း မတူပါ။ အားလုံးဟာ မဆိုးပါ။ ဒုတိယအကြိမ်မှာ နေ့တဝက်လောက် ချမ်းဖျားသူ အရေအတွက် မနည်းလှပါ။ Paracetamol ပါရာစီတမော၊ Ibuprofen အိုင်ဘူပရိုဖင်နဲ့ ကောင်းကြတယ်။ တချို့မှာ ၂ ခါလုံး သိသာတဲ့ခံစားရမူ အတော်ကိုနည်းကြတယ်။
• ဆေးထိုးတဲ့နေရာ အနည်းငယ်မှ အသင့်အတင့် နာခြင်း။
• အနည်းငယ် ဖျားမယ်
• မအီမသာ ခဏတာဖြစ်မယ်
• ဆေးအပိုမလိုဘဲ ခံစားရတာတွေ ၂-၃ ရက်နဲ့ ကောင်းသွားမယ်။
Severe Allergic Reactions ဆိုးဝါးတဲ့ အလားဂျစ် တုံ့ပြန်မှု ရှားတယ်။ အဲလိုရာဇဝင်ရှိသူတွေ ဆရာဝန်ကိုတိုင်ပင်ပြီးမှာသာ ကာကွယ်ဆေးထိုးရမယ်။ ဆိုးဝါးတဲ့ အလားဂျစ် တုံ့ပြန်မှု ဖြစ်လာရင် epinephrine or EpiPen နဲ့ ကုသလို့ရတယ်။
COVID ကာကွယ်ဆေး ထိုပြီး
• ဆေးထိုးတဲ့နေရာမှာ ၁၅ မိနစ်စောင့်ပြီး ဆေးခန်းကပြန်နိုင်ပြီဆိုမှ ပြန်ရမယ်။
• ဘေးထွက်သက်ရောက်မှုရှိသူသာ ပါရာစီတမော သောက်ရန်လိုတယ်။
• ကိုယ်တသက်လုံးစားသောက်လာတာ အကုန် ရှောင်ရန်မရှိ။
• အမြဲလုပ်နေတဲ့အလုပ် ဆက်လုပ်နိုင်။
• မနက်ထ သွားတိုက် မျက်နှာသစ်ပါ။
• ရေချိုးချိန်မှာ ရေချိုးပါ။ ခေါင်းလျှော်ချိန်မှာ လျှော်ပါ။
• လက်ကို လိုအပ်တိုင်း နေ့တိုင်း ဆေးပါ။
• ကာကွယ်ဆေးထိုးထားပြီးသူတွေလည်း အပြင်ထွက်ရင် နှာခေါင်စည်းလိုသေးတယ်။
• ကာကွယ်ဆေး ၂ ကြိမ်ပြည့်အောင်ထိုးပါ။
• အပိုတွေ တခုမှ မလိုပါ။ ဖေ့စ်ဘွတ်က ခိုင်းတာတွေ တားတာတွေ တခုမှ မလိုပါ။
COVID-19 ကိုဗစ်-၁၉ ကူးစက်ခံရရင် ဘယ်လိုလူတွေမှာ ရောဂါခံစားရတာ ဆိုးသလဲ ဆိုတော့၊
အမေရိကန် ကူးစက်ရောဂါများ ထိန်းချုပ်ရေးဌာနရဲ့ ထုတ်ပြန်ချက်အရ
၁။ အသက် ၆၅ နှစ်အထက်
၂။ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှု နည်းလွန်းသူများ
၃။ ကိုယ်အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်း (အသည်း၊ ကျောက်ကပ်) အစားထိုးထားရသူများ
၆။ ဆေးလိပ်သောက်သူများ တို့မှာ ခံစားရတာ ဆိုးလေ့ရှိကြတယ်။
VOM ။ ။ အချိန်ပေး ဖြေပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးအထူးပါဆရာ။